July 2013 ~ စိုင်းသူ - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း)
စိုင်းသူ - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း)
pc game များ
pc softwar များ
Android ဖုန်း version 4.0 တွေအထက်မှာ usb debugging လုပ်နည်း
9:49 AM Android ဖုန်း တွင်usb debugging လုပ်နည်း 20 comments
မင်္ဂလာပါကျွန်တော့် ညီလေးတစ်ယောက်မေးထဲကနေ Android ဖုန်း version 4.0 တွေအထက်မှာusb debugging ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ မေးလာလို့ ဒီပိုစ့် ကိုအမြန်ရေးလိုက်တာပါ။တကယ်တော့ တတ်သိနားလည်နေသူတွေအတွက်တော့ 
လွယ်လွယ်လေးပေါ့ ဗျာ။ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်ထားပြီးမှတော့root မယ် မြန်မာဖောင့် လေးထည့် မယ်စသည်ဖြင့် စမ်းသပ်ချင်ကြတာကတော့ ထုံးစံဖြစ်နေပါပြီ။
ဖုန်းကို root ပုံ နည်းလမ်းတွေကလည်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပြည့် နေပါပြီ။root လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်းလက်စွမ်းထက်တဲ့one click tool တွေလည်းပေါ်ပေါက်နေတော့root တာတော့ သိပ်အပန်းမကြီးတော့ ပါဘူး။အင်းဒီနေရာမှာ လူသစ်တွေအနေနဲ့usb debugging လုပ်တာလေးကိုမှမသိရင်တော့ ဘာကိုမှဆက်မလုပ်နိုင်တော့ ဘူးပေါ့ ဗျာ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ Android version 4.0 up တွေမှာ usb debugging လုပ်တာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။သိပြီးသားမိတ်ဆွေတို့ ကတော့ကျော်သွားလိုက်ပါ။
ပထမ မိမိတို့ ဖုန်းရဲ့Setting > application > ကိုသွားပါ development > usb debugging ကိုနိုပ်ပါ။
အိုကေဒီနေရာမှာသာမန် android version ၄.၀ အောက်က ဖုန်းတွေတော့ အိုကေသွားပါပြီ။Android version 4.0 up နှင့် အထက်ကျတော့usb debugging အမှန်ခြစ်လေးနေရာမှာ နိုပ်မရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကို မိမိတို့ ဖုန်းရဲ့setting > developer options > build number ကို(၇)နှစ်ချက်ထိပေးလိုက်ရင် တော့usb debugging လုပ်လို့ ရပါပြီခင်ဗျာ။
ဒါကတော့build number ကိုပြထားတဲ့ ပုံပါ။
တစ်ဆက်တည်း မိမိတို့ဖုန်းတွေနှင့် ကိုက်ညီမယ့်usb driver များကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာဝင်ယူ လိုက်ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့root လုပ်ချင်တဲ့ ဖုန်းအတွက် saithu102@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ပါပြီ။
ဆက်ဖတ်ရန် /READ MORE
Android ဖုန်းမှာ next launcher 3d ပုံလေးတွေနှင့် လန်းကြမယ်
8:34 AM android နှင့် ဆိုင်သော No comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မိမိတို့ ANDROID ဖုန်းကို NEXT Launcher 3D စတိုင်လေးနဲ့ သုံးကြမယ်ဗျာ။ဒီကောင်လေးကတော့ အားလုံးအကြိုက်တွေ့ စေမဲ့android apk လေးပါ။
ဖိုင်ဆိုဒ်က5mb ဖြစ်ပြီးတော့Android version 2.2 နှင့် အထက်မှာအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကဲအောက်မှာ screenshoot လေးကြည့် လိုက်ပါအုံး။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျက်။
ANDROID ဖုန်းတွေကို 3D ပုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်
8:06 AM android နှင့် ဆိုင်သော No comments
android ဖုန်းတွေအတွက် 3D အလန်း WALLPAPER လေးပါ။လုံးဝအလန်းနော် ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10 MB ပါ။Android version 2.2 နှင့် အထက်တွေမှာအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါကတော့အမြည်းလေးပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
android ဖုန်းတွေလည်း wifi့ hack ကျမယ်ဗျာ
10:07 AM android နှင့် ဆိုင်သော 1 comment
မင်္ဂလာပါ android ဖုန်းတွေလည်း wifi hack ကျမယ်ကောင်းကောင်းဗျာ။WEP, WPA, and WPA2.အထိတောင်ရတယ်ဗျာ။android version 2.2 နှင့် အထက်မှာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်းသေးသေးလေးဗျာ2 mb ထဲပါကဲအောက်မှာပုံလေးတွေကြည့် လို က်ပါအုံးေိေိ။
DOWNLOAD ; link -1- LINK -2
ဒီမှာ LIKE လုပ်ပေးပါ။.
10:07 AM ဘလော့ပညာ No comments
ဒီနေ့ရှယ်ပေးလိုက်တဲ့ပို့စ်လေးကတော့ ဘလော့မှာSimple Print Friendly နှင့် PDF Buton များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သုံးနည်းလေးပါ။သိပြီးကြသောမိတ်ဆွေတွေလည်းများပါပြီးမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာကျနော် Cond သွားယူနိုင်မည့်မူရင်းလင့်ခ်နှင်တကွ Templa HTML Cond ထဲထည့်နည်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိသုံးချင်သလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဆိုလိုသည်မှာဒီ Cond လေးက HTML Condထည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာအလွယ်တကူသုံးလို့ရတာကြောင့်ပါ။ကဲဒါဆိုကြိုက်သွားပြီးမို့လား။
အောက်က cond ကိုရှာပါ
တွေ့ပြီဆိုရင်အောက်မှာအောက်က cond ကိုထည့်ပေးပါ
မိမိတို့ လိုအပ်သလို စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်ခြင်သူများအတွက်တော့
သည်နေရာကနေ ကလစ်ပြီး သွားလိုက်ပါနော်....
ကိုယ်တိုင် လုပ်လိုသူတွေအတွက် အပေါ်ပုံလေးတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်နော်... အဆင်ပြေပါစေ။
အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..
အောင်အောင်(မကစ) ပိုင်ဆိုင်သော နေရာလေးများကိုလာလည်ကြပါ။ www.aungsanmks.blogspot.com
ကဲ။သည်နည်းကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ ပျင်းတဲ့သူတွေ ခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်... မိမိလိုခြင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ရှာပြီး ကုဒ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ထည့်နည်းကတော့ သိကြပြီးဖြစ်နေမယ်ထင်လို့ ထူးထွေ မပြောတော့ပါ..
10:06 AM ဘလော့ပညာ No comments
မိမိတို့ဘလော့ပေါ်မှာ အလှဆင်ခြင်သူများအတွက် Dancer ပုံလေးတွေကို
ရယူပြီးအလှဆင် နိုင်ပါတယ်နော်... မိမိတို့ လိုခြင်တဲ့ပုံလေးကို ရယူနည်းကတော့
ပုံလေးပေါ် မောက်တင် ညာကလစ်ပေး Copy Image Location ဆိုတာကိုကလစ်ပါ။
အဲမှာ ပုံရဲ့လင့်ကို မိမိတို့ မောက်မှာ ရရှိနေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
သွားရမည့်နေရာကတော့.... သည်နေရာကို ..... ကလစ်ပြီးသွားပါ။
panda gold လေးကိုသုံးပြီးမိမိတို့ ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ကြမယ်
5:59 AM anti virus ဆော့် ဝဲများ 1 comment
အားလုံးပဲဗျာ ဘာကီးမှထည့် မပေးရဘဲ panda gold protection ကိုသုံးမယ်ဗျာ။သူကတော့(6)လလောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးသုံးလို့ ရတယ်ဗျာမိမိတို့ ကွန်ပျူတာကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ဖို့ ဆိုရင် panda ကိုသုံးကြည့် ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဗျာ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့panda လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျက်
passwor ပေးထားသော win rar ဖိုင်များကို password ဖြေမယ်
5:36 AM နည်းလမ်းများ No comments
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကိုဒီနေ့ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ password ပေးထားတဲ့win rar ဖိုင်တွေကို ဘာဆော့ ဝဲမှမသုံဘဲနဲ့ အွန်လိုင်းမှာပဲ ဖြေကြမယ်ဗျာ။အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ နည်းလေးပါနော်။
တစ်ခါတစ်လေ မှာမိမိတို့ ရလာတဲ့ ဖိုင်လေးတွေကို password ပြန်ဖြေတဲ့ အခါpassword မသိလည်းဖြေလို့ ရတယ်ဆိုတော့ လန်းတာပေါ့ နော်။
(၁) အရင်ဆုံးအနေနဲ့ ONLINE CONVERT.COM ကိုသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ။
(၂) နောက်ပြီးရင် BROWSE နေရာမှာ မိမိပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုညွန်ပြပေးလိုက်ပါ။
(၃) ပြီးရင်.rar ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်အောင် zip ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီး
Convert File ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးconvert လုပ်တာကိုခဏစောင့် ပါ။
(၄) ပြီးရင် ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။(ခဏလေးပါပဲ)
နောက်ပြီးရင်တော့မိမိတို့ password ဖြေမရတဲ့ r ဖိုင်လေးဟာ zip ဖိုင်အဖြစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
11:04 PM နည်းပညာဂျာနယ်များ No comments
အင်တာနက်ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက်ဂျာနယ်
အတွဲ (၁၄) အမှတ် (၂၉)ကို တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 29 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက်အဆင် မပြေ
ဆုံးရှုံးသွားသောfacebook account ကိုပြန်ယူမယ်
10:56 PM နည်းလမ်းများ No comments
အဆင့် ၁ - www.facebook.com/hacked သို့သွားပါ။
အဆင့် ၂ - "My Account is Compromised" အား နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၃ - စာမျက်နှာ ဘယ်ဖက်အောက်ထောင့်ရှိ "I can't identify my account" အား နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၄ - Facebook မှ မေးမြန်းသည့် သင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မေးခွန်းများအား ဖြေပါ။
အဆင့် ၅ - Submit လုပ်ပါ။
မကြာမီတွင် Facebook မှ သင့်အား ဆက်သွယ်လာမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ account အား ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် ကူညီပါလိမ့်မည်။
ဤကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးပြီး စိတ်ညစ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်များအား မကြုံတွေ့လိုလျှင် မိမိ၏ account လုံခြုံရေးအတွက် မပေါ့ဆပဲ သတိထားပြီး နေထိုင်သင့်ပါသည်။
မိမိ account လုံခြုံရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အချက်များ -
- အလွယ်တကူ မသိရှိနိုင်မည့် password များထားပါ။
- အလျဉ်းသင့်သလို ပြောင်းလဲပါ။
- လုံခြုံရေး မေးခွန်းများ ထားရှိပါ။
- ဖုန်း SMS သုံး လုံခြုံရေး ၂ ထပ် ထားရှိပါ။
- မလုံခြုံသည့် ကြုံကြိုက်ရာ WiFi သုံးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- မိမိ Facebook နှင့် Email အား အချိန်ပြည့် ဖွင့်ထားခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- Facebook တွင် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်များ ဖော်ပြထားခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်လျက်
ဘလော့တခုမှ လိုခြင်သော ပုံ..ဒီဇိုင်း..တွေရဲ့ လင့်..ကုဒ် တွေကိုအလွယ် ရယူနည်း
10:43 PM ဘလော့ပညာ 1 comment
ကဲ ဘလော့ခရီးသည်ရဲ့ ဘလော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဗျားးးးးးးးးးးးးးးးးး သည်နေ့တော့ မင်္ဂလာသတင်းလေးလို့လဲ ပြောလို့ရပါမယ်... နောက်..မကောင်းသောအတတ်ပညာကို သင်ပေးတယ်လို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်....ေိေိ...ဘာဖြစ်ဖြစ် ပညာဆိုတာ ထိန်ချန်မထားအပ်ဘူးးလို့
ဆိုရိုးစကားရှိတယ်မလားး တတ်သည့်ပညာ မျှဝေခြင်းကလည်း မင်္ဂလာတပါးလို့ ဆိုရမယ်ပေါ့..အဟိ
မကောင်းတာသင်မယ့်လူက တရားသဘောတွေပါနေပြီ... မကောင်းတာဆိုပေမယ့် ကောင်းပါတယ်ဗျာ
ဒါလေးက ဘလော့ကာ အသစ်လေးတွေအတွက် အထူး လက်ဆောင်ပါ...
ဘာလဲဆိုတော့ တခြားပညာရှင်များရဲ့ ဘလော့ပေါ်က အလှဆင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ ဆိုဒ်ဘားက ဒီဇိုင်းလေးတွေ နောက် မိမိဘလော့ကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာလဲ...အရမ်းအသုံးးဝင်ပါတယ်.... ကိုယ်ပြုပြင်
လိုတဲ့ နေရာတွေကိုသည်နည်းလေးနဲ့ ရှာပြီး Html မှာ ကိုယ်လိုအပ်သလို အစားသွင်းအလှဆင်နိုင်လို့ပါဘဲ.....
ပုံလေးတွေနဲ့ သေခြာရှင်းပြထားပါတယ်.... သည်နေရာမှာ ဘလော့ခရီးသည်ရဲ့ အပေါ်က ပုံကြီးကို
ပုံရဲ့ လင့်ယူကြမယ်ဆိုပါတော့...အဲတာလေးနဲ့ ဥပမာပြ ပေးသွားးမှာပါ
အဆင့် (၁)..... အဆင့်-၁ အနေနဲ့... မိမိတို့ လိုခြင်သော ဘလော့ကိုဝင်လိုက်ပါ အဲဘလော့ရဲ့
လိပ်စာရှေ့က လိုဂိုလေးကို ကလစ်ပါ...ဘောက်လေးတစ်ခုကျလာမယ်... အဲမှာ more information ဆိုတာဆက်ကလစ်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၂) သည်အဆင့်ကျတော့...ဘောက် ဇယားကြီးးတစ်ခုကျလာပါပြီ.. အဲထဲက Media ဆိုတာ
ကိုကလစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...အဲတာဆို မိမိတို့လိုခြင်သော လင့်များ ကုဒ်များကို ရှာဖွေနိုင်
အဆင့် (၃) ဒါကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုပါတော့....အဲထဲမှာဘဲ ပုံပြထားသလိုပါ တခုချင်းရှာဖွေ
ခိုးးယူ အဲလေ.... လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်... မိမိတို့ တခုချင်းကလစ်တာနဲ့
ကလစ်တဲ့လင့်ဆိုင်ရာ ပုံလေးတွေဟာာအောက်မှာ ပြနေပါတယ်..ကိုယ်လိုခြင်တဲ့ပုံရောက်တာနဲ့ အဲလင့်ကို ကူးယူု အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..... အားလုံးး အဆင်ပြေကြပါစေ..မခိုးတတ်ပါက...ဟုသည်ပါးစပ်... မလုပ်တတ်ပါက
မိမိဘလော့ ပြဲုပင်ရာမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပြီးး မြန်ဆန်စေပါတယ်...
10:42 PM ဘလော့ပညာ No comments
မိမိတို့ ပုံတွေ စာသားတွေကို အရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးလိုပါက အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်အောင်
မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. အမူနာ ပုံလေးကတော့ ဘလော့ခရီးသည်တို့ ဇနီးမောင်နှံပုံလေးပါ.....တိန်.....
ကဲစိတ်ဝင်စားရယ် သည်နေရာ လေးကတေ သွားလိုက်ပါနော်..
အဲလိုလေးကျလာမယ်... Image file name ကနေ Bowser ကိုကလစ်လိုက်ပါ..ဒါဆို ကွန်ပျူတာ ဖိုင်
ကျလာပါမယ်.. မိမိတို့ လုပ်လိုသော ပုံတွေ ကိ်ုရွေးချယ် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ.... အလွယ်လေးးနော်...
တားတား ကောင်မယေးးတော့ အယူကြနဲ့တိနားးးးေိေိေိေိ
Computer ဆက်တိုက်သုံးနေသူများ မျက်စိကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ...
10:40 PM နည်းပညာသတင်းများ No comments
Computer ဆက်တိုက်သုံးနေသူများ မျက်စိကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ..
ယနေ. အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ လူကြီးရော လူငယ်ပါ ကွန်ပျူတာ ဖြင့် နေစဉ် ရက်ဆက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကျရခြင်းကြောင့် မျက်စိ ချွတ်ယွင်း၊ အားနည်းခြင်း တို.ဖြစ်ပေါ်လာတာ ထူးဆန်းတဲ့ အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို မချွတ်ယွင်း၊ အားမနည်းအောင် .ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ။
အောက်ပါ နည်းလမ်းလေး တွေ ကိုလိုက်နာပေးလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ၊ keyboard၊ mouse တို. ကို နေရာမှန်ထားတက်ဖို. အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ screen ဟာ သင့်မျက်လုံးကနေ သင့်ရဲ့လက်တဆန်.စာ အကွာ နဲ. မျက်လုံးရဲ့ ၂၀ ဒီဂရီအောက် နိမ့် နေရပါမယ်။
သင့် အခန်းတွင်း အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့နေပါစေ။ ဒါမှ ကွန်ပျူတာ screen မှလာသော reflection တွေကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ screen အား သင့်မျက်စိ နှင့် သင့်တော်ရာ အလင်း၊အမှောင် setting လုပ်ထားပါ။
Anti-reflective Lenses ပါသော မျက်မှန် ကို တပ်ပေးခြင်းဖြင့် တောက်ပသော အရာမှလာသော reflection တွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ.မျက်စိဆရာဝန်က သင့် အား ကွန်ပျူတာ နှင့် ထိတွေ.နေသူမှန်းသိရင် ထို Anti-reflective Lenses ထည့်ထားတဲ့ မျက်မှန်ကို ညွန်းပါလိမ့်မယ်။
မိနစ် ၂၀၊ ပေ ၂၀၊ အခါ ၂၀၊ ခြေလှမ်း ၂၀
ကွန်ပျူတာ နှင့် အလုပ်လုပ်သူများ မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာတိုင်း ခေါင်းကို ခဏဘေးကိုလှည့်ပြီး ပေ၂၀လောက်ဝေးတဲ့အရာတခုခုကို ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်း ဟာသင့်ရဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးအား သက်သာရာ ရစေပါတယ်။ နောက်ပြီး အခါ ၂၀ လောက် မျက်စိ အား ပိတ်လိုက်ဖွင့် လိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့် မျက်လုံး စိုစွတ်ခြင်းကို ရယူပါ။ ပြီးရင် ခဏ ထိုင်ခုံမှ ထပြီး ခြေလှမ်း ၂၀ လောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့် သွေးလှည့်ပတ်ပါစေ။
လူတစ်ယောက်ဟာ ၁ မိနစ်အတွင်း ပုံမှန် ၁၂ ခါ မျက်တောင်ခတ် ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာနဲ. အလုပ်လုပ်နေရရင် ၅ ခါ လောက်သာ မျက်တောင်ခတ် တာကို သင်သတိထားမိပါသလား။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မျက်စိအား ခြောက်ကပ်နေစေပါတယ်။ ထိုသို့ ခြောက်ကပ်မနေအောင် မျက်စဉ်း ခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မတ်မတ်ထိုင်ပြီး သင့်ရဲ့လက်ဖဝါး နှစ်ခုအား နွေးလာသည်အထိ ပွတ်ပေးပါ။ ထိုနွေးနေသော လက်ဖဝါးနဲ့ သင့်မျက်စိနှစ်ဖက်ကို ၁မိနစ်လောက်ဖုံးအုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်မျက်စိညောင်းကိုက်၊ ပင်ပန်းလာတိုင်း ၂ကြိမ်၊ ၃ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပါ။ ထို လက်ဖဝါးမှ လာသော နွေးထွေးမူသည် သင့်ရဲ့ ပင်ပန်းနေသော မျက်စိအား သက်သာစေပါတယ်။
အားတဲ့အချိန်မှာ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရေအေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ အင်မတန် လန်းဆန်းခြင်းကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သောက်ပြီး သား လက်ဖက်ခြောက် အထုပ်ကလေး များကို လွင့်မပစ်ပဲ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားပြီး အားတဲ့အချိန်ကျရင် ထို လက်ဖတ်ခြောက်အထုပ် ၂ထုပ်အား သင့်မျက်စိ တဖတ်စီိတွင် တင်ပြီး အနားယူပါ။ မျက်စိအားအေးမြ စေပါသည်။
ဗီတာမင် A, C, E ပါသော အစားအစာများ ပိုစားပါ။ သံပရာရည်၊ အသီးအရွက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဥ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ လဲ ပိုစားပေးပါ။
Credit to -myanmmar new update
6:32 AM ဘလော့ပညာ No comments
ဘလော့ထဲမှာ Mp3 နားထောင်လို့ရတာ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလို့ ရ
တယ် ဘာလို့ လည်း ဆိုတော့ စာဖတ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေက တစ်
ချို့ကြတော့ စာဖတ်ရင်း သီချင်း နားထောင်တတ်တယ် အချို့ ကြ
တော့ စာဖတ် ရင် သီချင်းနားထောင်တာ မကြိုက်ဘုး အားရုံလွဲ
သလိုဖြစ်တတ်တယ် အဲ့ တာကြောင့်သီချင်းထဲ့ မယ်ဆို အော်တို
မလာခိုင်းတာ ပိုကောင်းပါတယ် လေရှည်နေတာ လုပ်ငန်းစပါစို့ 
(1) Mp3 Player ဆိုဒ်ကိုသွားရမယ် ဒီမှာ နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ
(2) facebook နဲ့ ဝင်လို့ ရပါတယ် ....
သရဲတွေနဲ့ သွေးပျက်တဲ့ စရာကောင်းတဲ့ android game လာပြီဗျာ။
5:32 AM android free game များ 1 comment
ကြောက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမဆော့ ရေိေိ။android အတွက်ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် 3D game လေးပါဗျာ။
သွေးပျက်လောက်တဲ့ ခြောက်ခြားမှု့ တွေနဲ့ 
game လေးက android version 2.3 နှင့် တွေအထက်မှာအားလုံးအိုကေပါတယ်။
အက်ရှင်ဂိမ်းလေးပါပဲ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့148 mb ထဲပါ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ko sai thu နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း
5:31 AM android free game များ No comments
ဒါကတော့ Android တွေအတွက် ကြယ်စင်တွေနဲ့ အာကသထဲကစစ်ပွဲပါဂိမ်းလေးပါ။
3D game လေးဖြစ်ပြီး android version 3.0 နှင့် အထက်တွက်လုံးဝအိုကေပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 
960 mb ရှိပါတယ်။အက်ရှင်စွန့် စားခန်းဂိမ်းလေးဖြစ်တဲ့ အတွက်လိုချင်တဲ့ သူများအောက်မှာဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့် ဘလော့ လေးကိုလာလည်ကျတဲ့ သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်လျှက်။
5:12 AM နည်းပညာဂျာနယ်များ No comments
မင်္ဂလာပါအပါတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ DIGITIAL LIFE VOLUME-2 ISSUE-12 ထွက်ရှိလို့ လာပါပြီ။အားပေနေကျသူငယ်ချင်းများအကြိုက်တွေ့ မယ့် သတင်းများကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ။
mobile guide journal issue113
5:05 AM နည်းပညာဂျာနယ်များ No comments
မင်္ဂလာပါ အပါတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ mobile guide journal issue 113 အားကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းများဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ဒီတစ်ပါတ်ကတော့ သတင်းတွေဘယ်လိုထူးတယ်ဆိုတာဖတ်ချင်သူများ
ငွေကျပ် ၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများ Ringtune များထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်
3:32 AM နည်းပညာသတင်းများ No comments
ယခုလက်ရှိ ငွေကျပ် ၁၅၀၀ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာယခင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေလို Ringtune
များထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က
Sakura Tower မှာကျင်းပတဲ့ ငွေကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများ Ringtune
စတင်အသုံးပြုနိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆက်တဲ့ အခမ်းအနားမှ သိရပါတယ်။
ငွေကျပ် တစ်ထောင့်ငါးရာ တန် မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် Hello Music ၀န်ဆောင်မှုကို
MIS (Myanmar Telecommunication & Technology Services)
ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ် ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်လိုသူတွေအနေနဲ့ ငွေကျပ် တစ်ထောင့် ငါးရာ တန်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ၁၂၁၂
သို့ ခေါ်ဆိုပြီး အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နဲ့ နေရပ်လိပ်စာတို့ကိုပေးပို့ကာ ပြုလုပ်နိုင်သလို
အသုံးပြုမယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ နံပါတ် ၃၃၃ ကို Register လို့ ရိုက်နှိပ်ပြီး SMS ပေးပို့ကာ Ringtune
အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့မေလကတည်းက စတင်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့
အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ၁၈၇၅၀ ဦးခန့်ရှိပြီး ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှုအတွက်
သံစဉ်တွေကိုလည်း www.hellomusic.com မှ mylibrary မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့
သိရပါတယ်။ အဆိုပါRingtune များအသုံးပြုမှုကိုတော့
၀န်ဆောင်ခအတွက်လစဉ်ကြေးအနေနဲ့ ၁ လကို
ငွေ နှစ်ထောင် ကျပ်နဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်အတွက် ၃၀၀ ကျပ် ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Credit To MRTV 4
like ပေးခဲ့ ကြပါအုံး
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုဒ်ကလေးမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်းတွေကိုမသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒေါင်း လုပ်လုပ်နည်းတစ်ချို့ ကိုပြန်လည်တင်ပြပေးလို...
မိမိ နေအိမ်မှာ မလုပ်ကောင်းတဲ့ အရာများ
မြန်မာလူမျိုးများ အနေနဲ့ရှေးအယူအဆ ဆုံးမမှုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတာများပါတယ်။ မိမိတို့ ငယ်စဉ်က ဘိုးဘွားများရဲ့ဆုံးမမှုအော...
AVS Video Converter ဖြင့် မြန်မာ subtitle ထည့်နည်း
ကျနော် သိသလောက် ကျနော် လုပ်ဖူးသလောက်ကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ နိူင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်းထိုးနည်းလေးကို မျှဝေ...
Antivirus programs မလို virus သတ်နည်း
Malware , Adware , Spyware စ,တဲ့ Virus တွေ ... နောက် USB Pan Drive တွေက ဝင်လာတတ်တဲ့ Recycler folder Virus , New Folder.exe Virus စ,တဲ...
ရွှေမှုန်ရတီ ဝေါပေပါ For Android
ရွှေမှုံရတီ ပုံ (၄၉) ပုံ စုစည်းထားတာပါ ။ ဝေါပေပါ အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ ၅ မီဂါဘိုက် ရှိပါတယ်။ စ...
မြန်မာစာမမှန်တဲ့oppo r 831 ကို root ဖောက်ပီး မြန်မာစာထည့်ကြမယ်
oppo r 831 ကို root ဖောက်ပီး မြန်မာစာ ထည့်ချင်သူမှားအတွက် ပါ...ကွန်ပျူ တာမလို ပဲ မြန်မာစာ အဆင်မပြေ သူများ .တစ်ထိုင် တည်းနဲ့ အမြင်မှန်ြ...
Computer model brand အလိုက်BIOS ထဲ ကို ဝင် လို့ ရ မဲ့Key မှတ်တမ်းပါ။
Windows ပြန် တင်တော့ မဲ့မိမိ ကွန်ပျူ တာ ရဲ့BIOS ထဲ ကို ဝင် ဖို့ အတွက် Acess key ကို သိဖို့ လို ပါတယ် ။ဒါမှ မိမိ စိတ်ကြိုက် BIOS ထ...
ACER ROOT လုပ်နည်းများ (1)
ADB Toolkit (1)
Adobe product စာအုပ်များ စုစည်းခြင်း (1)
Adobe များ (2)
ANDROID E-BOOKS (3)
android free game များ (65)
Android Root Tool များ (23)
Android Themes Download (1)
android နှင့် ဆိုင်သော (301)
android နှင့် ဆိုင်သောနည်းလမ်းများ (29)
Android ဖုန်း တွင်usb debugging လုပ်နည်း (1)
android ဖုန်းနှင့် ဆိုင်သောဗဟုသုတများ (22)
android အတွက် မြန်မာဖောင့် များ (16)
anti virus ဆော့် ဝဲများ (20)
ASUS ZENPHONE ROOT လုပ်နည်း (2)
basebrand ime နှင့် ဆိုင်သော (1)
Bootable Maker (1)
Browser များ (13)
Browser ပြဿနာများ (4)
cc cleaner (2)
comptuer shorcut ဆိုင်ရာ (2)
Cracked Version (Clumsy Ninja ) (1)
design softwares (8)
DICTIONARY နှင့် ပက်သက်သော (6)
E-book ဆိုင်ရာစာအုပ်များ (63)
Easy Android Tools (1)
Education Apk (1)
Facebook ဆိုင်ရာ (47)
Facebook ပြဿနာများ (7)
Format Tools (1)
GLIVE PHONE ROOT လုပ်နည်း (1)
Gmail ဆိုင်ရာများ (2)
Google Chrome ဆိုင်ရာ (2)
Health Application (1)
HTC MIUI သွင်းနည်း (1)
Huawei firmware (2)
Huawei frimware error (2)
HUAWEI ROOT လုပ်နည်းများ (4)
HUWAEI FIRMWARE တင်နည်းများ (2)
imobile firmware တင်နည်း (1)
Imobile root လုပ်နည်းများ (3)
Internet download manger full version (22)
ios Downgrade ဆင်းနည်းများ (1)
IOS များ (24)
ios မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း (5)
IPHONE နည်းလမ်းများ (11)
iphone/ipad/ipod touch နည်းလမ်းများ (2)
ISO BURNER (6)
Itune Giftcard Free (1)
Journal Download (1)
Knowledge (Android) (4)
Knowledge (ios) (7)
Learn English Android Application (1)
lenovo firmware တင်နည်း (1)
Lenovo root လုပ်နနည်းများ (1)
LG ROOT လုပ်နည်းများ (2)
Microsoft Application (2)
mobile news များ (7)
Myanmar SMS Application (1)
nokia android root လုပ်နည်းများ (1)
nokia ဖုန်းနှင့် ဆိုင်သော (4)
nokia မြန်မာစာ (1)
Office များ( PC ) (3)
oppo root လုပ်နည်း (6)
paypal နှင့် ဆိုင်သော (1)
pc game များ (18)
pc soft ware များ (160)
photoshop ဆိုင်ရာများ (11)
recovery for pc (1)
Recovery for Phone (2)
Samsung galaxy root လုပ်နည်းများ (19)
SAMSUNG GALAXY FIRMWARE (5)
sim lock ဆိုင်ရာ (2)
Smart Android Application (7)
software dead ဖုန်းများ (4)
speed up connection (2)
tablet နှင့် ဆိုင်သော (1)
Today Special (1)
twitters နှင့် ဆိုင်သော (1)
Viber Block နည်း (1)
Viber For Pc (2)
Viber ပြဿနာများ (3)
Video Chat Software များ (2)
Video Edit Software များ (5)
webcam များ (1)
Window7ဆိုင်ရာ software များ (1)
window9(1)
window loader များ (13)
window phone များစုစည်းမှု့ (2)
Window Phone နှင့်ဆိုင်သော (1)
window them များ (1)
Windows Password Remover (2)
Windows ခွေများစုစည်းမူ (5)
WWE RAW များ (4)
zawgyi font (2)
zawgyi keyboard mac os x (1)
နည်းပညာ ဗဟု့သုတများ (27)
နိုင်ငံခြား ဂျာနယ်များ (2)
ဖုန်းဈေးနှုန်း များ (1)
ဗုဒ္ဒ နှင်ဆိုင်သော (1)
မြန်မာဖောင့်း ဒီဇိုင်းစုံ (2)
အသုံးဝင် စာပေ ဆောင်းပါးများ (4)
င်္Folder lock (1)
Android ဖုန်း version 4.0 တွေအထက်မှာ usb debugging...
Android ဖုန်းမှာ next launcher 3d ပုံလေးတွေနှင့် ...
panda gold လေးကိုသုံးပြီးမိမိတို့ ကွန်ပျူတာကိုကာကွ...
passwor ပေးထားသော win rar ဖိုင်များကို passwordြေ...
Computer ဆက်တိုက်သုံးနေသူများ မျက်စိကိုဘယ်လိုကာကွယ...
သရဲတွေနဲ့ သွေးပျက်တဲ့ စရာကောင်းတဲ့ android game လာ...
Adobe Dreamweaver CS6 12.0.1 Build 5842 Full Versi...
Internet Download Manager IDM 6.17 Build6Full Ve...
Kaspersky All Version Keys [July 27, 2013] Full Do...
MailWasher Pro 2013 7.2.0 Final Full Version With ...
Zoom Player MAX 8.6.1 Full Version With Key
MOZILLA FIREFOX မှာ ယာယီ BOOKMARK လေးလုပ်မယ်
Android ဖုန်း Screen မှာ video ရိုက်မယ်
Internet Speed ကိုမြှင့်မယ့် Internet Cyclone 2.1...
iPhone တစ်လုံးကို UnLock / Upgrade ပြုလုပ်နည်း (စာ...
ကွန်ပျူတာ အခြေခံအချက်လက်များ (စာအုပ်)
Proshow Gold ဖြင့် Slide Show ပြုလုပ်နည်း (စာအုပ...
Wondershare MobileGo for Android 4.0.0.245 For Win...
Android အတွက် Bsc video player လာပြီဗျာ
Sparky 0.83 APK လေးနဲ့ မိမိတို့ ဖုန်းscreen ကိုေ...
Lux Auto Brightness 1.51 APK free download
Bounty Hunter: Black Dawn 1.10.02 APK + SD DATA
Cyberlink-youcam-deluxe-5a02705retail full version...
ဖုန်းမလာပါနဲ့ APK မြန်မာလို
SHIMARO A13-MID Q9 TABLET PC ကို ROOT ပြီးတော့ မြန...
Corel VideoStudio Pro X6 16.1.0.45 SP1 Full Versio...
Clean Disk Security 8.03 Full Version With Key
Laptop များနဲ့ ကခုန်ကြမယ် (စာအုပ်)
Advamced SystemCare v7 beta 1 For Pc လေးလာပြီ
ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ကခုန်ခြင်း (စာအုပ်)
Blogs ပြုလုပ်နည်း (စာအုပ်ကောင်း)
SONY Sound Forge Pro 11.0 build 234 Full Version W...
KMSpico v8 for Offline Office 2013 and Windows Act...
Frozen key board pro v0.5.2 free download
ဝင်းဒိုး 8 မှာ mouse ရဲ့double click speed ကိုမြန်...
Prince of Persia Shadow&Flame v1.0.0 (Unlimited Mo...
Clean Disk Security 8.03 Full + Crack ( လန်းတယ်နော...
Computeractive Issue 402 2013 - UK မဂ္ဂဇင်း အားဖတ်...
DriverMax 7.13 Free Download
၂၅.၇.၂၀၁၃ တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဖြန့်ခ...
Windows 8 မှာ အသုံးပြု့မယ့် REDBOX
monday night raw 22/7/2013
မိမိတို့Android ဖုန်းမှာရာသီဥတုကိုပြတဲ့ ပုံအလန်...
FRONTLINE COMMANDO: D-DAY 1.3.1 APK + SD DATA GAME...
ကျော် ခွခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် သည်နည်းလေးသုံးလိုက်...
Pro Myankey V2.0 Beta5For Android
Adobe® Photoshop® Touch 1.5.0 APK free download
Combo Crew v1.1.0 apk game free download
AppMonster Pro Backup Restore 2.7.6 APK free down...
Android phone တွေမှာအင်တာနက် speed ကိုမြှင့် ကြမယ်...
Android phone တွေမှာအင်တာနက် speed ကိုစမ်းသပ်ကြမယ်...
Linux suver အကြောင်းသိကောင်းစရာတိုတိုထွာထွာများ
House of the Dead overkill lr+ data feedownload
mobile guide journal issue 112 အားရယူနိုင်ပါပြီ
How To Get FREE Unlimited Glu Games Credits!
ZPlayer 3.8.8 APK free download for android
Order-chaos-online-210-apk-sd- game free download...
MX Player Pro proper for Android
သောက်ကြာနေ့ ည smart down shows များ
အင်တာနက် search engine တွေမှာ professional တစ်ယော...
Password Lock ကျနေသော Lumia 920 ကို Hard Reset လုပ...
PC Cleaner Pro 2013 v11.6.13.7.15
APPLE APPSTORE က ဝယ်ထားတဲ့ APP/GAMES တွေ ဖုန်းကနေ ...
Copyright © 2013 စိုင်းသူ - (နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း) | မူပိုင် ဘလော့ကာ
Design by ကိုစိုင်းသူ | အမှတ်တရ နည်းပညာများအား - ပြန်ည်မျှဝေခြင်း | ဖြစ်ပါတယ်...